Usoro Ọrụ - Molooco
Jiri koodu "10% Gbanyụọ" Nweta 10% Gbanyụọ
AllNgwaakpaụlọ ịwụMmaỤgbọ ala NgwaEchiche ekeresimesiClothingNkwekọrịta kwa ụbọchịElectronicsNgwaGardenOnyinye OnyinyeHairHallowHealthHouseKidsKitchenndị ikomMusicanu uloNgwaọrụ ekwentịShoesSportNgwaọrụIhe egwuregwu & egwuregwuTravelUncategorizedWomen
Kaadị / $0.00 0
A na-ejikwa weebụsaịtị a Ụlọ ọrụ Molocoo LLC. N'ebe niile na saịtị ahụ, okwu ahụ "anyị", "anyị" na "nke anyị" na-ezo aka Molocoo.com. Molocoo.com na-enye weebụsaịtị a, gụnyere ozi niile, ngwaọrụ, na ọrụ dị site na saịtị a, gị onye ọrụ ahụ, ọ dị ka ịnakwere usoro niile, ọnọdụ, atumatu na ọkwa niile ekwuputara ebe a.
Ana ebupu iwu anyị niile site na China. Anyị mere ọtụtụ ndị ahịa obi dị ụtọ dịka ọtụtụ iwu anyị bugara. Simply ga-esoro na nnukwu ezinụlọ anyị.
Cheta na: Dịka esi na China ebupu iwu anyị niile, anyị anaghị eburu ibu maka ụdị ọrịa ọ bụla.
Nkebi nke 1 - Usoro ntanetị
NKEBI NKE 2 - NKWUKWU N'OKWU
Ị kwenyere na ị gaghị mụta nwa, ịmepụta ma ọ bụ jiri akụkụ ọ bụla nke Service, ojiji nke Ọrụ, ma ọ bụ nweta ọrụ ma ọ bụ kọntaktị ọ bụla na weebụsaịtị ebe a na-enye ọrụ, ma ọ bụrụ na anyị edeghị akwụkwọ ikike .
Isi okwu ndị dị na nkwekọrịta a ka agụnyere maka ịdị mma naanị agaghị egbochi ma ọ bụ na-emetụta usoro ndị a.
NKEBI NKE 3 - Izi ezi, Ijuju, na oge ezi ozi
Nkebi nke 4 - NKPIFTA NA Ọrụ NA Ahịa
Nkebi nke 5 - ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ (ọ bụrụ na ọdabara)
Productsfọdụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nwere ike ịdị naanị na ntanetị site na weebụsaịtị. Ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị a nwere ike ịnwe oke, ha nwekwara ike ịlaghachi ma ọ bụ gbanwere naanị dabere na anyị laghachi iwu.
Anyị emeela mgbalị niile iji gosiputa na agba na ihe oyiyi nke ngwaahịa anyị na-egosi na ụlọ ahịa. Anyị agaghị ekwe nkwa na kọmputa gị nyochaa ngosipụta nke agba ọ bụla ga-abụ ezi.
Anyị na-edebe ikike ma ọ bụghị iwu, iji kwedebe ahịa nke ngwaahịa anyị ma ọ bụ Ọrụ nye onye ọ bụla, ógbè ma ọ bụ ikike. Anyị nwere ike iji ikike a mee ihe n'okwu ikpe. Anyị debere ikike iji dochie ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla anyị na-enye. Nkọwa niile nke ngwaahịa ma ọ bụ ọnụahịa ngwaahịa ga-agbanwe n'oge ọ bụla n'amaghị ama, na naanị uche anyị. Anyị debere ikike ịhapụ ngwaahịa ọ bụla n'oge ọ bụla. Onyinye ọ bụla maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla a rụrụ na saịtị a adịghị ebe ọ bụla amachibidoro.
NKEBI NKE 6 - KWUO EGO EGO NA AKWILLKWỌ AKW .KWỌ
Anyị na-edobe ikike ịnabata iwu ọ bụla ị nyere anyị. Anyị nwere ike, site na otu uche anyị, amachibido ma ọ bụ kagbuo ọnụ ọgụgụ zụrụ nke mmadụ ọ bụla, n'ụlọ ọ bụla ma ọ bụ n'otu iwu. Ihe mgbochi ndị a nwere ike ịgụnye iwu enyere ma ọ bụ n'okpuru otu akaụntụ ndị ahịa, otu kaadị akwụmụgwọ, na / ma ọ bụ iwu na-eji otu ịgba ụgwọ yana / ma ọ bụ adreesị mbupu. N'ọnọdụ anyị mere mgbanwe ma ọ bụ kagbuo iwu, anyị nwere ike ịnwa igosi gị site na ịkpọtụrụ adreesị email na / ma ọ bụ akara ụgwọ / nọmba ekwentị enyere n'oge enyere iwu ahụ. Anyị na-edobe ikike ịnwe ịmachi ma ọ bụ gbochie iwu nke, na mkpebi ikpe anyị, nke ndị na-ere ahịa, ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị na-ekesa, debere ya.
Ị kwenyere ịnye ihe dị ugbu a, zuru ezu na ezi azụ na ozi akaụntụ maka ihe niile ịzụtara na ụlọ ahịa anyị. Ị kwenyere iji melite akaụntụ gị na ozi ndị ọzọ ozugbo, tinyere adreesị ozi-e gị na nọmba kaadị akwụmụgwọ na oge mmebi ka anyị wee mezue azụmahịa gị ma kpọtụrụ gị dịka ọ dị mkpa.
Nkeji edemede 7 - Nhọrọ ngwaọrụ
NKEBI NKE 8 - EGO
Contentfọdụ ọdịnaya, ngwaahịa na ọrụ dịnụ site na Ọrụ anyị nwere ike ịgụnye ihe ndị ọzọ.
Anyị enweghị ụgwọ maka nsogbu ọ bụla ma ọ bụ mmebi metụtara ịzụ ma ọ bụ ojiji nke ngwaahịa, ọrụ, akụrụngwa, ọdịnaya, ma ọ bụ azụmahịa ọ bụla ọzọ metụtara na weebụsaịtị ọ bụla nke atọ. Biko jiri nlezianya nyochaa iwu na omume ndị ọzọ ma jide n'aka na ị ghọtara ha tupu itinye aka na azụmahịa ọ bụla. Mkpesa, nkwupụta, nchegbu, ma ọ bụ ajụjụ gbasara ngwaahịa ndị ọzọ kwesịrị ịkwado ndị ọzọ.
Nkeji edemede 9 - NKWUKWU ND US ỌR US, NTEDTA, NA NKWUKWU ND OTHER ỌZỌ
Ọ bụrụ na, na arịrịọ anyị, ị na-eziga ụfọdụ nnyefe ụfọdụ (dịka ihe nkedo ndenye) ma ọ bụ na-enweghị arịrịọ n'aka anyị, ị na-ezite echiche, aro, atụmatụ, atụmatụ, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, ma ọ bụ n'Ịntanet, site na email, site na ozi nzipu, ma ọ bụ (nchịkọta, "ihe"), ị kwenyere na anyị nwere ike, n'oge ọ bụla, n'enweghị ihe mgbochi, dezie, detuo, bipụta, kesaa, sụgharịa ma jiri ya mee ihe ọ bụla n'ihe ọ bụla i zigara anyị. Anyị bụ na ọ ga-abụ onye ọ bụla (1) iji kwado ihe ọ bụla n'eji obi ike; (2) iji kwụọ ụgwọ maka ihe ọ bụla; ma ọ bụ (3) iji zaghachi ihe ọ bụla.
Nkeji edemede 10 - NKWU NDERS
Anyị na-achịkwa ntinye ozi gbasara onwe gị site na ụlọ ahịa amụma nzuzo.
NKEBI NKE 11 - NJỌP ,R,, EZIOKWU, NA OMUME
Anyị agaghị arụ ọrụ ọ bụla iji melite, gbanwee ma ọ bụ dokwuo anya ozi na Ọrụ ma ọ bụ na weebụsaịtị ọ bụla metụtara ya, gụnyere enweghị njedebe, ozi ọnụahịa, ma e wezụga iwu achọrọ. Enweghị mmelite ma ọ bụ ntanye emetụtara na Ọrụ maọbụ na weebụsaịtị ọ bụla metụtara kwesịrị igosi na enwere ike ịgbanwe ma ọ bụ emelite ozi niile na Ọrụ ma ọ bụ na weebụsaịtị ọ bụla metụtara ya.
IKPEHE 12 - EGO EGO
NKEBI NKE 13 - NKWA OWU; Mmachi nke ibu
Ị kwenyere n'ụzọ doro anya na iji ojiji, ma ọ bụ enweghị ike iji, ọrụ ahụ bụ naanị ihe ize ndụ gị. Ọrụ na ngwaahịa na ọrụ niile enyere gị site na ọrụ ahụ (ma ọ bụrụ na anyị kwupụtara n'ụzọ doro anya) nyere 'dị ka' na 'dị ka ọ dị' maka ojiji gị, n'enweghị ihe nnọchiteanya, ikike ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla, ma ọ bụ akọwapụtara, gụnyere ihe niile e nyere ikike ma ọ bụ ọnọdụ nke ahịa, àgwà ahịa, ahụike maka otu nzube, ogologo oge, aha, na mmebi iwu.
Na agbanyeghị, molooco.com, ndị isi anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị mmekọ, ndị nnọchi anya anyị, ndị ọrụ ngo, ndị ọrụ ụlọ, ndị na-eweta ọrụ, ndị na-enye ọrụ ma ọ bụ ndị nyere ikikere ga-aza ajụjụ maka mmerụ ọ bụla, ọnwụ, nkwupụta, ma ọ bụ ihe ọ bụla, na-apụtachaghị ìhè, nke merenụ, ntaramahụhụ, pụrụ iche , ma ọ bụ mmebi ọ bụla nwere ụdị ọ bụla, gụnyere, na-enweghị mmachi uru bara uru, ego furu efu, nchekwa furu efu, ọnwụ data, ụgwọ ngbanwe, ma ọ bụ mmebi ọ bụla yiri ya, ma ọ dabere na nkwekọrịta, mmekpa ahụ (gụnyere ileghara anya), ụgwọ siri ike ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, na-ebilite site n'iji ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla ewepụtara site na iji ọrụ ahụ, ma ọ bụ maka nkwupụta ọ bụla ọzọ metụtara n'ụzọ ọ bụla iji ọrụ gị ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla, gụnyere, mana na ọnweghị oke, njehie ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla na ọdịnaya ọ bụla, ma ọ bụ mmebi ọ bụla ma ọ bụ mmebi nke ụdị ọ bụla dakwasịrị n'ihi iji ọrụ ahụ ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla (ma ọ bụ ngwaahịa) ezitere, bufee, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ wepụtara site na ọrụ ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na a dụọ ha ndụmọdụ banyere ikike ha N'ihi na ụfọdụ steeti ma ọ bụ ikike anaghị ekwe ka mwepu ma ọ bụ njedebe nke iwu maka ihe ọghọm ma ọ bụ mmebi mebiri, n'ụdị steeti ma ọ bụ ikike ndị ahụ, ọrụ anyị ga-ejedebe ruo oke iwu nyere ikike.
Nkeji edemede 14 - NKWA
Agree kwenyere ịkwụ ụgwọ, chebe ma jide molooco.com na ndị nne na nna anyị na-enweghị mmerụ ahụ, ndị enyemaka, ndị mmekọ, ndị mmekọ, ndị isi ọrụ, ndị isi, ndị isi, ndị ọrụ, ndị ọrụ ngo, ndị ikikere, ndị na-enye ọrụ, ndị na-arụ ọrụ n'okpuru, ndị na-eweta ọrụ, interns na ndị ọrụ, enweghị mmerụ ọ bụla na nkwupụta ma ọ bụ mkpa ọ bụla, gụnyere ụgwọ ndị ọka iwu nwere ezi uche, nke ndị ọzọ ọ bụla mere n'ihi ma ọ bụ na-esite na ngabiga nke Usoro Ọrụ a ma ọ bụ akwụkwọ ha tinye site na ntụaka ma ọ bụ mmebi iwu ọ bụla ma ọ bụ ikike nke ndị ọzọ.
NKEBI NKE 15 - NGWA NGWA
Nkeji edemede 16 - oge
NKEBI NKE 17 - UME NILE
Usoro ọrụ ndị a yana ụkpụrụ ma ọ bụ iwu arụmọrụ anyị biputere anyị na saịtị a ma ọ bụ n'ihe gbasara Ọrụ ahụ bụ nkwekọrịta na nghọta niile dị n'etiti anyị na anyị ma chịkwaa ọrụ gị, na-akwado nkwekọrịta ọ bụla ma ọ bụ nke dị ugbu a, nkwukọrịta na atụmatụ , ma ọ bụ nke edere ede ma ọ bụ edere, n'etiti gị na anyị (gụnyere, mana ọnweghị oke, ụdị nsụkokwu ọ bụla nke Usoro Ọrụ).
Nkeji edemede 18 - IWU Ọchịchị
Usoro ọrụ ndị a yana nkwekọrịta ọ bụla dị iche iche anyị nyere anyị maka ya Ọrụ ga-achịkwa ma rụọ ya dịka iwu nke USA si dị.
Nkeji edemede 19 - GBANWEE N’ỌR OF ỌR S
Nkeji edemede 20 - Kpọtụrụ anyị
Ajụjụ banyere Okwu nke Service ga-zitere anyị ozi na [email protected]
Kedu uru akwụkwọ a bara?
Pịa na kpakpando ka ị gụọ ya!
Nkezi ọkwa 5 / 5. Ọnụ ọnụ ọgụgụ: 1
Onweghi votu rue ugbu a! Buru onye mbu were gosi banyere post a.
Soro gị iji
kwadoro site Igwe ojii